Farqiga u dhexeeya tamarta hirarka iyo tamarta mawjada | Cusbooneysiinta Cagaaran
Daniel Palomino | | La cusboonaysiiyay 08/03/2017 15:23 | Tamarta biyaha badda, Tamarta Wave
Labada tamarba waxay ka yimaadaan badda, laakiin ma ogtahay halka tamarta hirarka iyo tamarta mowjaduhu ka yimaadaan?
Runtu aad ayey u fududahay in la ogaado waxa ay tamartu tahay waana in magaca uu bixiyo tilmaamo badan, tusaale ahaan qulqulka, wuxuu ka yimaadaa hirarka iyo hirarka, durba in yar ka dhib badan, way timaaddaa ruxruxo.
Si kooban iyo macluumaadka aasaasiga ah ee ay tahay inaad xafido waa kan Tamarta biyaha badda sidaan soo sheegnay waxay ka imaanaysaa hirarka, dhaqdhaqaaq ka kooban a kor u kaca heerka badda waxaana soo saaray ilaa laba jeer maalintii soo jiidashada Dayaxa.
Isticmaalka tamarta noocan ah waa mid aad u badan oo la mid ah quwadda korontada laga dhaliyo (Waan ka hadli doonaa mustaqbalka). Mar alla markii aan helno biyo xireen ku yaal aagga godka (afka marinku wuxuu sameysmaa hal gacan oo ballaadhan oo qaab ballaadhan u ballaadhan) oo leh albaabbo iyo marawaxado ay ku rakiban yihiin, waxaan siinnaa muhiimad dhererka ay hirarku gaari karaan.
Taasi waa, marka hirarku qarka u saaran yahay in la gaadho (hirarku kor bay u kacayaan), irdaha waxaa lagu furaa iyada oo loo rogayo marawaxadaha biyaha galaya godka kadibna la urursho culeys biyo oo ku filan sidaasna lagu awoodi karo in albaabada loo laabo ka hortagga biyaha. ka soo noqoshada badda.
Marka hirku hoose yimaado (hirar yar), biyaha ayaa lagu sii daayaa marawaxadaha.
Dhaqdhaqaaqyadan biyaha waxay ka dhigayaan marawaxadaha inay u jeestaan ​​dhinaca soo gelitaanka iyo ka bixista biyaha waana waxa soo saara soo saaridan ee tamarta korantada.
Tamarta qulqulka waxaan ka heli karnaa faa'iidooyin iyo khasaarooyin labadaba.
Faa'iidooyinka dhexdooda waxaa la dhihi karaa waa tamar la cusboonaysiin karo iyo in ay tahay tamar aad u joogto ah, maadaama had iyo jeer ay jiraan dhaqdhaqaaqa mowjadaha iyadoo aan loo eegin sanadka.
Si kastaba ha noqotee, cilladaha ayaa ka weyn, sida inay leedahay wax soo saar tamarta oo goos goos ah, waa inaad sugto goor hore iyo goor dambe maalinta si aad u soo saarto, cabirka iyo qiimaha xarumahaaga, iwm.
Dhinaca kale waxaan leenahay tamarta mawjada, taas oo aan ka badnayn tamarta hirarka sidaan horay u soo sheegay waana taas hirarka badda waxaa ku jira qadar fara badan oo tamar ah oo ka soo jeeda dabaylaha, si dusha sare ee badweynta loogu arko kululeeyaha tamarta dabaysha.
Waa mid ka mid ah noocyada tamarta la cusboonaysiin karo ee inta badan maanta la barto waxaana jira dhowr aaladood sida Roodhiga Cockerell iyo Duck Cusbada si loogu beddelo dhaqdhaqaaqa mowjadda koronto
Duck Salter waa sabayn qaab duck (sidaas awgeed magaceeda) halkaas oo qaybta ugu cidhiidhiga ahi ay ka soo horjeedo hirarka si ay u nuugaan dhaqdhaqaaqooda sida ugu macquulsan. Kuwani waxay ku wareegayaan hoosta tallaabada mowjadaha hareeraha dhidibka oo bixinaya dhaqdhaqaaq wareeg ah oo ku wareegsan dhidibkiisa, iyagoo maareynaya inay dhaqaajiyaan bamka saliidda, iyagoo mas'uul ka ah dhaqaajinta marawaxadaha.
Taas bedelkeeda, Doomaha 'Cockerrel raft' waxay ka kooban yihiin aalado farshaxan oo diyaar u ah inay helaan saamaynta hirarka. Rift-yadu waxay fuulaan oo hoos u degaan iyagoo adeegsanaya dhaqdhaqaaqan si ay u wataan mishiinka ku dhaqaajiya koronto-dhaliye aaladda korantada.
Si kastaba ha noqotee, sidoo kale waxaa jira faa'iidooyin iyo faa'iido darro, faa'iido ahaan waxaan u aragnaa in saameynta deegaanka ay ficil ahaan tahay mid aan waxba ka jirin, in badan oo ka mid ah tas-hiilaadka xeebta waxaa lagu dari karaa dekedda ama dhismayaasha kale iyada oo aan la dhihin waa il tamar laga cusboonaysiin karo.
Dhibaatooyin ahaan; Tamarta mawjadaha si sax ah looma saadaalin karo, maadaama hirarku ay ku xiran yihiin xaaladaha cimilada, rakibidda badaha aad bay u adag tahay in loo gudbiyo tamarta laga soo saaray dhulweynaha, iwm.
Sidaad u aragto, way fududahay in la kala saaro labada nooc ee tamarta ee laga soo saaro badda, in kasta oo aan sidoo kale ka faa'iideysan karno tamarta ka soo baxda biyaha badda, beddelka tamarta kuleylka ee badweynta iyo xitaa tamarta ka timaadda wejiga cusbada, wax ka yar sidii caadiga ahayd laakiin tan Maanta waxaa la baranayaa in sida ugu wanaagsan looga soo saaro badaha loona tijaabiyo in mustaqbalka magaalooyinka oo dhami ay isku filnaan karaan noocyadaan tamarta la cusboonaysiin karo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Tamarta biyaha badda » Farqiga u dhexeeya tamarta qulqulka iyo tamarta hirarka
Yuusuf Ribes dijo
Faransiisku waxay ku lahaayeen xaruntooda cudurrada baabuurta ee hareeraha Wabiga Rance muddo 50 sano ah, oo si ka duwan Zapatero, waxay ku qamaaraan cilmi-baarista tamarkan, oo leh khibrad keliya, halkii ay ku bixin lahaayeen balaayiin kabood oo tamar ah, iyagoo riyoonaya in la baaro, oo aan faa'iido laga helin weli. Haddii aan hore u ogaanay in mustaqbalka ay faa'iido yeelan doonto, markaa waxaan si habboon ugu maalgelin doonnaa tikniyoolajiyadda.
Jawaab Josep Ribes
Ma aqbali karo wax intaa ka badan adiga Josep.
Salaan iyo mahadsanid faallooyinkaaga.
Valladolid waxay ku boorineysaa in loo isticmaalo baaskiil wasakhda badan awgeed
Spain waxay ku qasbanaan doontaa inay maal gashato gawaarida korontada si ay ugu hogaansamaan Midowga Yurub